नेपाल टेलिकमको लिज लाइनको महसुल दर ३६%सम्मले घट्यो Bizshala -
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको लिज कनेक्टिभिटीको नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ।
गत असार १ गतेदेखि लागू हुनेगरी इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट दुवै लिज लाइनको महसुल दर ३६ प्रतिशतसम्म कम हुने गरी कायम गरिएको हो।
इन्टरनेट लिज लाइनअन्तर्गत १ देखि २० एमबीपीएस ब्यान्डविथको महसुल दर पहिले रु. २ हजार ५०० रहेकोमा अब रु. १ हजार ६०० मात्र हुनेछ। त्यसैगरी २१ देखि ५० एमबीपीएसको महसुल दर पनि रु. २ हजार ३०० बाट घटाएर रु. १ हजार ६०० नै कायम गरिएको छ।
५१ देखि १०० एमबीपीएस र १०० एमबीपीएस ब्यान्डविथभन्दा बढी क्षमताको महसुल क्रमशः रु. २ हजार १०० र रु. १ हजार ९०० रहेकोमा अब दुवैको महसुल दर रु. १ हजार ५०० कायम गरिएको छ।
इन्ट्रानेट लिज लाइनअन्तर्गत १ देखि १० एमबीपीएस ब्यान्डविथको महसुल रु. २ हजार ७०० रहेकोमा अब रु. २ हजार ४००, ११ देखि १०० एमबीपीएसको रु. २ हजार ४०० रहेकोमा अब रु. २ हजार १०० र १०० एमबीपीएसभन्दा बढीको रु. २ हजार १०० रहेकोमा अब रु. १ हजार ८०० कायम गरिएको छ।
नेपाल टेलिकमले विभिन्न सरकारी तथा व्यावसायिक ग्राहकका मागअनुसार उच्च क्षमताको इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट लिज सेवा प्रदान गरिरहेको छ। यस सेवामा इन्टरनेटको अपलिंक र डाउनलिंक क्षमता सधँै बराबर रहन्छ भने यो सेवा चौबीसै घन्टा निरन्तर डेडिकेटेड रुपमा उपलब्ध भइरहन्छ।